“ABO”n , MAQAA MITII !!! KAAYYOO UMMTA OROMOOTI !!! « QEERROO
January 14, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
SEENAA Y. G(2005) kutaa 3ffaa.fi xumuraa
Qabsoo Oromoon gaggeessaa jiru , kan addunyaan gaggeessituun addaa miti. rakkoon qabsoo keessattis ta’ee akka Ummataatti nu mudataa jiru , addunyaa irrattis mul’ateera. Mul’ataaS jiras. Dubbi guddaan akkamittin keessa dabranii bakka yaadan ga’aan ? isa jedhu malee, akkamiin keessa gangalataa jiraatan ? kan jedhu irraa barnoota hin argannu. Biyyoonnis ta’uu ummatoonni addunyAa keenyaa, wareegama baasanii akkuma biyya isaanii dhuunfatan, kanneen wareegama ol aanaa baasanii kan namaa dhaalanii taa’aan akka jiran beekuun barbaachisaadhaa. Kanarraas kan barannu , gama lameenittuu jabaatanii wareegama baasanii waan barbaadan bira ga’uf irraa barachuu malee, ka isaanii faarsaa keenya cabsaa jiraachuun gonkumaa furmaata ta’uu akka hin dandeenyeedha.
Akka yaada kiyyaatti, rakkoodhaa jedhee kanan fudhadhuu, ykn anaaf yaaddoodhaa kanan jedhu, Qabsoon kun maa jabaachuu didee osoo hin taanee, waa’ee bitamtoonni fi kachachaltoonni heddummaachaa deemuu ykn warra fageessanii yaaaduu ykn ofittootaan waan qabsoo keenya duubatti harkisu dhalachaa buluu isaati. Qabsoon har’aa jabaachuu dhiisuu boruu ni jabaata. Bitamtoota baayyachaa deemuu fi warra qabsoo kana hankaaksaa jiran heddummaachaa jiraachuutu na yaaddeessa. Yeroo tokko tokko , diinna qabsoo keenyarratti aggaammatu caalaa ykn Diina ABO irratti duuluu caalaa ykn qixxee Ilmaan Oromoof jibba qaban baayyifachaa dhufuudhaa. Ani akka anaaf galutti , dhaabbileen Oromoo Ilaalcha hordofaniin wal mormuun ni jiraata. Garuu wal jibbuun eessaa akka dhufe naaf hin galu. Wayyaanee ni jibbina. Dhiiga keenya ta’ee isa faallaa keenya ta’ellee akka itti ibsinuu qabna. Kan har’aa argaa fi dhaga’aa jirru garuu wal balleessuuf arreedu agarra. Kun fafa. Addunyaa irraallee adda nu taasisuu danda’a jedheen amana.
Mee Ilaalaa hayyaalaallattoonni jecha qabsoo oromoo itti laaffisanii of harka galchuu barbaadantu jira. Yaaduma isaanii waliin kan wal fakkaatu wayyaaneenis ni gaggeessiti. Warri safuu irraa baqatee, Hoggana Dhaabaa fi ABO adda baasanii ibsaa jiru. wayyaaneen ABO dhabamsiisuuf karoorri ishee waggaa 25 fi sirnoonni dabran hundumtuu akeekini isaanii tokkoffaa Hogganootaa fi warra qaroo ta’an dhabamsiisuudha. Isa booda ABO isaan barbaadan ummatanii Biyyatti galchuudhaa. Kana hundatu beeka. Mee warra Hogganootaan shanee jedhee, ABO ni jaallannaa , kaayyoo keenyaa jedhanii falmaa jiran kana adeemsa wayyaanee irraa maaliin adda baaftan ? Hoggana ofii ni morman . hin jibban. Adeemsa isaanii yoo morman ni gorfatan.garuu yoo jibban gorfachuullee hankaakan. Kanarra taree, ABO fudhannee warra maqaa fafaa itti moggaafnu kana dhabamsiifnaan maalii??? Dhuguma qabsoo kanaaf ykn Ummata kanaaf yaaduudhaa ? wareegama xiqqaa hanga guddaa itti kafalamaa jiruuf deebiin barbaachisu kanaa ? miidhamni ummata keenya biyya keessaaf galanni kanaa ???????
OROMOOn MAAL BARBAADA ?
OROMOOn ka barbaadu isa Biyya keessaa finiinsaa jiruudhaa. Har’aa eenyullee oromoo abbaluu hin danda’uu. Dhugaa jiru kan yeroo kamirrayyuu caalaa adda baafateera hubateera. Maqaa isaan daldalamuu hin barbaadu. Humna oromoof falmu malee humna oromoo qabata godhu hin barbaadu. Oromoon kan dandeetti fi gootummaan isaaf dhaqabee simachuu , yoo dhabee ammoo wareegama barbaachisu kafalee abbaa biyyaa ta’uuf kan isa dhorku tokkollee hin jiru. gabrummaa jala jiraatanii , anatu caalaan isaaf furmaata hin taatu. Waggaa 150 oliif Oromoon gabrummaa jala jiraachuu osoo beekanii fi waggoota meeqaaf dantaa isaaniif jiraachaa turanii har’aa akka nama irriibaa ka’ee dhaaboota heddummeessanii Oromoo irratti abbaa ta’uuf warra arreedan hin barbaadu.dhaaba Oromoof hadooduu eenyullee Oromotti hin himu. Kan har’aa bara miidhamaa fi salphinaa keessa waliif hin gallee, bara badhaadhiinaa oromoon waliif gala jechuun soba. Kanaaf qabatamaan Oromoof kan dhaabbatuu, dhiiga isaa kamirrattu shira hin yaadu. kaayyoo isaa raawwachiisuuf jedhee dhaaba dhala Oromoof haqaan dhaabbate kan jibbu gonkumaa Oromoof jaalala hin qabaatu. Kun qalbii Ummata Oromoo keessa maxxanee kan jru ta’uu hunduu beeku qaba.
QEERROON MAAL BARBAADA ?
Qeerroon qeerroodhaa ! sossobbii firaa mitii kan diinaafuu jilbeenfatee hin beeku. qacalummaa qeerroo ilaalanii waan dabaa irratti raawwachuuf yaaluun, wallaalummaa ofii mirkaneessuudhaa. Qeerroon Oromoo hanga wayyaaneen jilbeenfattu ykn kuftuutti duubatti ka jedhu miti. Bilisummaa fi walabummaa ka barbaadu, ijoollee wareegamtu barbaadee abbaa irratti ta’uuf arreeda osoo hin taanee, ofiin wareegamee karaa saaquuf kan badaduutu dhugummaa waan qabuuf, kanatu fira qeerroo ta’uu danda’aa. Qeerroon sochii kan eegalee waggaa tokko asi jechaa, waan intarneetaa irraan odeeffannoo sochii qeerroo guutuu kan qabu of fakkeessuun of sobuudhaa malee qeerroo sobuu miti. qeerroon wareegamaan oromiyaa dhuunfachuu barbaaddii . atakaaroon biyya alaa qeerroof waa tokkollee miti. Ilmatti abbaa hin himan. Haadhallee. Qarreettis abbaa hin himan. Haadhallee. Warra waggaa 15f qabsootti siila’ee Ummata Hogganutti ce’ee jirutti adeemsa himuuf yaaluun yakka. Qeerroon gonkumaa sagal hin gaggalagaltu. Waanuma manaa baateef taati. Ummati Biyya keessaa guutummaatti kana ragaa ba’aaf. Naamuusaa fi qarummaa isaaniin karaa eegalan ni xumuru. Gonkumaa Ummata isaanii irratti abbummaaf hin fiigan.
QABSOON OROMOO MAAL BARBAADA ?
Qabsoon oromoo wal dhaga’uu barbaada. Deeggarsa barbaada. Amma walii galeen hiriiranii diina konkolaachisuuf arreedaa jira. Diina mitii firayyuu yeroon itti kadhatan dhabamaa jira. Warra diina jala fiiguu gorsuunis yeroon dabraa jira. Diinnis adeemsa isaa fixatee tarkaanfii abdii kutannaa irra jira. Kun hundi qabsoon oromoo maal akka barbaadu argisiisa. Kana tilmaamanii waan qabsoon nama irraa eeggatu ba’uu qofaadha. Wal akeekna malee dirree kana irratti waan walitti himnuu hin jiru. daangaan diinaa guutee dhangala’ee jira. Biyya keenya irratti diinni qabsoo oromoo dhabamsiisuu ykn Oromoo cabsuuf, sochii qabsoo isaa shororkeessummaatti ramadee labsii adda addaan nama barbaadu qabee hidhee ajjeesaa jira. ABO ta’uu ragaa malee yakka jedhee duula Oromoo laffarraa duguuguu gaggeessaa jira. Har’a Maqaa ABOn Ummata Oromoo walii galaatu hidhamaa , ajjeefamaa , Biyyaa ari’amaa jira. Kun haqa argaa fi dhaga’aa jirru. Ega akkas ta’ee, waan Hiwaati ummata keenya irratti badii raawwataa jiru hundaaf , Ummati Tigiraayii guutuun itti gaafatamuuf jira. Adeemsi kun ammoo qarqara irra ga’ee jira. Itti fufu fi dhiisuu isaaf wayyaanootatu of harkaa qaba malee Oromoo miti. kanaaf qabsoon waan nurraa barbaaddu raawwachuuf gamanumaa qophaa’uun dansaadha. Kan yaadaa jirru waan akkasii malee dhaaba bixxilaa jiraachuu mitii. Guguddaan keenyaas……..akkuma guddummaa keessanii ta’aa !!!!!!!!!!baayyee gaddinas … nu ofkalchaa !!!!!!!!!
« SBO: Amajjii 15 bara 2017. Oduu, Sirna Kabajaa Guyyaa WBO Jiddugala Mooraa Leenjii WBO irratti haasaa Miseensi KHR-ABO Jaal Dr. Dagafaa Abdiisaa taasisan Akkasumas yaada Hirmaattotaa
“Ilmi Kee Garaa Kutateera,Jajjabaadhu Yaa Haadha Dhiira” Wallee Warraaqsaa Haaraa Artist Hawwii H. Qananii »